Home Wararka Gudaha Kulan lagu qiimaynayay waddooyinka laamida ah ee ay dowladda federaalku ka waddo...
Kulan lagu qiimaynayay waddooyinka laamida ah ee ay dowladda federaalku ka waddo Deegaanka Soomaalida ayaa lagu Jigjiga qabtay
Kulan lagu qiimaynayay waddooyinka laamida ah ee ay dowladda federaalku ka waddo Deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay Jig-jiga.
Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax, Madaxweyne-ku-xigeenka DDS oo uu weheliyo Wasiir-ku-xigeenka Xafiiska Madaxweynaha, mudane Maxammed Yuusuf Rooble ayaa madasha kulammada ee Garaad Maxammed Dool ku furay kalan lagu soo bandhigayay mashaariicaha laamida ah ee ka socda Deegaanka ee ay waddo dowladda federaalku.
Kulankan waxaa goob-joog ahaa masuuliyiinta Wakaaladda Jiddadka ee JDFI, shirkadaha qaandaraasleyaasha ah ee gacanta ku haya waddooyinka laamida ah ee ka socda Deegaanka iyo masuuliyiinta gobollada iyo degmooyinka. Ujeeddaduna waxa ay ahayd in si wadajir ah loo qiimeeyo habsami-u-socodka mashaariicaha laamida ah ee socda.
Madaxwayne-ku-xigeenka Deegaanka, mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa sheegay in ay muhiim tahay in mar walba la qiimeeyo lana daba’galo shirkadaha gacanta ku haya waddooyinka laamida ah, si wakhtigii loogu talo’galay loogu soo afmeero.
Intii uu kulankani socday waxaa lagu soo bandhigay heerka iyo darajooyinka ay marayaan waddooyinku, kuwa uu gaabisku ka jiro iyo kuwa bogaadinta mudan. Ugu dambaynna, waxaa la iskula dardaarmay in la dadajiyo mashaariicaha iyada oo maamulladu ay shirkadaha ka caawinayaan adeegyada ay uga baahdaan, kuna daba’galaya shaqooyinkooda.
In ka badan 10 mashaariico waa-weyn oo waddooyin ah ayaa ka socda gobollada iyo degmooyinka Deegaanka, kuwaasi oo ay waddo Wakaaladda Jidadka ee federaalku; waddooyinkan ayaa dherer ahaan dhan ku dhawaad 2000 oo km.
Previous articleFahad Yaasin Oo Dhaliilay Madaxwayne Xasan Shiikh
Next articleHaweeneydan ayaa horey u ahaan jirtay macalin, waxayna ka dib ku biirtay kooxda